रेश्मा देखी रेशम सम्म ! - Movies Club Nepal
Home	News	रेश्मा देखी रेशम सम्म !
by Movie Club Nepal २८ श्रावण २०७५, सोमबार ११:१२
उदाउदो सुर्यलाई न त रोक्न सकिन्छ न त छेक्ननै त्यस्तै देवदहबाट एउटा जुनकिरी भएर उदाएको ब्यक्ती आज सुर्य उन्मख हदैछन् । देवदहबाट उदाएका जुनकिरी अहिले आफ्ने प्रकाशलाई बुटवल हुँदै काठमाडौं सम्म पर्याउन सफल बन्नु चानचुने कुरा होईन । यो सफलताले ति जुनकिरीलाई भविष्यमा एक सफल नक्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्ने कुरा सामान्य होईन । ति देवदहबाट उदाएर बुटवल हुदै काठमाण्डौ सम्म आफ्नो बास्ना छोड्न सफल ति ब्यक्ति हुन् । रुपन्देही देवदहका रेशम न्यौपाने (रेश्मा डार्लिङ्ग)
सन् २०१५ भन्दा अगाडि उनी रेश्मा डार्लिङ्गबाट चिनिएका थिए । २०१५ मा मिस डाईमण्ड रुपन्देहीका बिजेतासम्म बन्न सफल रेश्मा अहिलेको युवा पुस्ताले चिन्ने एक परिचित र चर्चित नाम हो । देवदह ९ खैरेनीमा जन्मिएका रेशम परिवारका कान्छा सदस्य हुन । तर परिवारभन्दा बाहिरी समाजमा समाजकै जेठा छोराका रुपमा आफ्नो नाम स्थापित बनाउन सफल बनेका छन् ।
हिजोको दिनमा आफुलाई समाजमा चिनाउदा रेश्मा डार्लिङ्ग हु भनेर चिनाउदा गर्वको महशुस गर्ने उनले अहिले आफ्नो बास्तविक नाम रेशम न्यौपानेलाई नेपालमै परिचित बनाउन सक्षम बनेका छन् । अहिले उनले आफुलाई रेश्मा डार्लिङ्गसँगै रेशम न्यौपाने हुँ भन्न कत्ति विचलित हुदैनन । र चर्चित कोरियोग्राफरका रुपमा उनी सबैमाझ भिजेका समेत छन् । वितेको तीन वर्षदेखि कोरियोग्राफरलाई आफ्नो रुचिको विषय बनाएका रेशमले अहिलेसम्म लुम्विनी अञ्चलमा मात्रै ३५ बढी कार्यक्रममा कोरियोग्राफर समेत गरि सकेका छन् । विभिन्न ब्यूटिप्रेजेन्ट आयोजकका ब्राण्ड एम्बेस्टर बनेका उनी आर एन स्टाईलका फाउण्डर हुन् ।
विभिन्न ब्यूटिप्रेजेन्ट गर्दै आएको आरएन स्टाईलमा १८ जना सदस्य छन् भने त्यसको जर्ज समेत बस्दै आएका छन् । नेपालका सबै विभिन्न स्थानमा कोरियोग्राफर र जर्ज बन्दै हिड्ने रेशम अहिले मिस हिमालय नेपालका कोरियोग्राफर छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि कोरियोग्राफरका रुपमा राज गर्ने उनले सपना बुनेका छन् । आफ्नो सपना पुरा भएमा भविष्यमा वृद्धवृद्धा आश्रम खोल्ने ठुलो इच्छा समेत राखेका छन् ।
अश्लेषा अगि प्रदिप र पुजा पछि भिडदै।